आज जोर–बिजोर सवारी खुकुलो – zooomnp
आज जोर–बिजोर सवारी खुकुलो
प्रकाशित मिति: बिहिवार, पौष १०, २०७१ समय - १२:४७:२६ | 25,December 2014
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार शुक्रबार दिउँसो ३ बजेपछि उपत्यकाका सडकमा मोटरसाइलक तथा साना निजी सवारीलाई जोर–बिजोरमा कडाइ गरिने छैन। साँझ ५ बजेपछि साना सार्वजनिक सवारीका लागि पनि जोर–बिजोर खुकुलो पारिनेछ। चक्रपथभित्र आउने ठूला सार्वजनिक सवारीका हकमा भने बिजोर नम्बरप्लेटका सवारी छिर्न दिइने छैन।
सम्मेलनका कारण पाँच दिनदेखि सर्वसाधारणले सास्ती बेहोरिरहेकाले सम्मेलन सकिएलगत्तै सवारी आवागमन सहज बनाउन जोर–बिजोर प्रणाली आंशिक रूपमा खोल्ने तयारी भएको महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले मंसिर ८ देखि जोर गतेका दिन जोर नम्बरप्लेट र बिजोर दिनमा बिजोर नम्बरका सवारी मात्र चल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
सार्क सम्मेलननिम्ति आएका विशिष्ट पाहुना फिर्ता नहुञ्जेल शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्म भने चक्रपथभित्रका सडकमा सवारी आवागमन प्रभावित हुनेछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका प्रतिनिधिमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र श्रीलंकाका प्रमुख बिहीबारै फर्केका छन्। शुक्रबार फर्कनेमा भुटानका प्रधानमन्त्री र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री छन्।
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना शुक्रबार बिहान साढे १० बजे बंगलादेश विमानको नियमित उडानबाट फर्कने छिन्। उनी विमानस्थल जानु आधा घन्टाअघि नै सोल्टी होटलदेखि कालिमाटी, त्रिपुरेश्वर, नयाँबानेश्वर, तिनकुने, एयरपोर्टका सडक खाली गराइनेछ।
अचम्म नमान्नुस! दुइ बर्षमै जानेछ गोलाप्रथाबाट नै एकतिहाई सांसदहरुको सांसद पद
ओलीबाट भारतलाई लाग्ने भयो नसोचेको झट्का! प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो बिदेश भ्रमण चीनबाट हुने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गरे खुलासा
माओवादीले टुंगो लगायो १७ जना समानुपातिक सांसद, को बने एक्लो पुरुष सांसद? सुची सहित